फ्राइड टमाटर - Thermomix रेसिपी | ThermoRecines
मैले यो पत्ता लगाएदेखि सरल, छिटो र सफा के मेरो Thermomix® संग फ्राइड टमाटर बनाउन को लागी हो - म यो प्यान मा फेरि कहिल्यै तलेको छैन। त्यसोभए म सबै गिलास मा स्प्लाश को बारे मा बिर्सन्छु र यसलाई पल्टाउनु पर्छ ताकि यो स्थिरता लिन्छ र जलाउँदैन।
यो नुस्खा सधैं तयार गर्न को लागी एक आदर्श आधारभूत हो। ठूलो मात्रामा बनाउन सकिन्छ र congelar भागहरुमा। यस प्रकार, हामी यसलाई पछि व्यञ्जनहरु मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि कुचल टमाटर को लागी कल, फ्राइ time समय कार्यक्रम बिना, तयारी मा केहि मिनेट बचत।
म यो तरीका मा फ्राइड टमाटर तयार गर्न मनपर्छ यति प्राकृतिक किनकि उनीहरु सामान्यतया कृत्रिम रंग र संरक्षकहरु किन्नेहरु लाई जोड्छन्। यस तरीकाले म जान्दछु कि म के खाँदै छु र मेरो परिवारलाई दिदैछु।
घरमा हामी यसलाई एक संगत को रूप मा धेरै प्रयोग गर्दछौं चावल, पास्ता, मासु, माछा र तरकारीहरु। यसको अतिरिक्त यो छ ग्लुटेन, अण्डा र ल्याक्टोज को लागी एलर्जी को लागी उपयुक्त।
1 भुटेको टमाटर
एक आधारभूत नुस्खा कि हाम्रो भान्छा मा हराइरहेको हुनुहुन्न।
कुल समय: 38M
1000 कुचल टमाटर (प्राकृतिक वा क्यान्ड)
चिनी २ चम्मच
नुन १ 1 चम्मच
हामीले तेललाई गिलास र कार्यक्रममा राख्यौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
बाँकी सामग्रीहरू थप्नुहोस्, छोप्नुहोस् र ढोकाहरूमा legs खुट्टालाई समर्थन गर्दै वाष्पीकरणलाई सजिलो पार्न र स्प्लासिing बेवास्ता गर्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
समय को अन्त्य मा यो प्रयोग गर्न को लागी तयार छ, सुरक्षित वा फ्रिज।
थप जानकारी - भेरोमामा सेतो चामल / पास्ता कुकिंग
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु, साल्सास
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » साल्सास » भुटेको टमाटर
हुनसक्छ यो धेरै मूर्ख प्रश्न हो ... तर हे, म यहाँ जान्छु! हाहा तपाई प्राकृतिक टमाटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई थर्मोमिक्समा कुचुन सक्नुहुन्छ, बरोबर ??? मेरो ससुराले एक तरकारी बगैचा छ र फ्राइड टमाटर बनाउँछ, तर यो टुक्रा र बीउ छ, र हामी यो रुचि छैन। के यो किनिएकोसँग मिल्दोजुल्दो छ?
हो, अर्को दिन मैले तिनीहरूलाई राजमहलबाट टमाटर टमाटरले बनाएको थिएँ र म धेरै राम्रो थिएँ।
यसलाई क्रश गर्नुहोस् र उही प्रक्रिया।
यो प्रयास गर्नुहोस् र तपाईं देख्नुहुनेछ
वाल्मिटालाई जवाफ दिनुहोस्
Jessi, तपाईं यसलाई काट्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईं किन्दा एक जस्तो देखिन्छ। प्रयास गर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस्।
धेरै राम्रो, म तपाईंलाई आश्वासन दिन्छु, घरमा हामी औद्योगिक फ्राइड गरिएको टमाटर होइनौं, विशेष गरी किनभने मलाई प्रिਜ਼ਰभेटिभ वा रंगहरू मनपर्दैन ..... यो विधि धेरै स्वस्थ र प्राकृतिक छ, यसलाई चलाएर हेर्नुहोस्, तपाईं फेरि त्रेको टमाटर किन्नुहुन्न। अभिवादन
मैले थर्मोमिक्स भएकोले मैले यो फेरि गरेको छैन, यो एकदम सफा छ र यो धनीको रूपमा बाहिर आउँछ
स्वादिष्ट !! मैले यो हालै गरिरहेको छु र रमाईलो छ, विशेष गरी किनभने तपाईंलाई थाहा छ यो १००% प्राकृतिक हो, तर वास्तवमै! म प्याज, लसुन र केही तुलसी पातहरू थप्न चाहान्छु यसलाई थप इटालियाली टच दिन।
इरेन सुझाव को लागी धन्यवाद, म यसलाई प्रयोग गरी दिनेछु।
के भुटेको टमाटर राम्रोसँग भुटेको छ? पानी बाहिर आउँदैन? के तपाईंले पर्याप्त समय दिनु भएको छ? धन्यवाद
यो राम्रोसँग भुटेको बाहिर आउँदछ र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं केही थप मिनेटहरू थप्न सक्नुहुन्छ र यो समस्या बिना गाढा हुनेछ।
राम्रो आइडिया के हो, मेरो बुबा गार्डेन छ र हामी टोमेटोहरू बने रह्यौं, हाँजाजाजा यदि यो हामी एक ग्लास जारमा लिन्छौं र यो मारियामा सुरक्षित छ, हामी सबै कुरा गर्छौं। ?
निश्चित गर्नुहोस् कि ती हुनेछन् र उनीहरू महान हुनेछन् !!!
म यसलाई बचाउनको लागि क्यान उमाल्दिन। तुरुन्तै टमाटरको चटनी तयार भइसकेपछि, म यसलाई सिसाको भाँडोमा खन्याउँछु र कपडाको उपयोग गरेर यसलाई बन्द गर्दछु किनकि तिनीहरू तातो छन्। तब म तिनीहरूलाई उल्टो पल्टाउँछु र उनीहरूलाई बिर्सन्छु। अर्को दिन वा २ दिनहरू मैले तिनीहरूलाई बचत गरें। म तपाईलाई आश्वस्त गर्न सक्छु कि उनीहरु हर्मेटिकली छाप लगाईएको छ, उनीहरुका पीओएफको साथ !! खोल्दा मैले तिनीहरूलाई खोल्नको लागि उपकरण प्रयोग गर्नुपर्दछ वा मेरो पति वा मेरो छोराको मद्दतको लागि, जो म भन्दा शक्तिशाली छन्। अवश्य पनि, डु boats्गा लिनुहोस् जुन राम्रोसँग नजिक छ। मलाई आशा छ यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ, किनकि यो तुरुन्तै समाप्त हुन्छ र यो काम वा उमालेको तातो खर्च गर्न आवश्यक छैन। शुभकामना।
धन्यबाद, बेगोना, तपाईको सुझाव को लागी, हामी त्यसो गर्नेछौं। शुभकामना
नमस्ते! के कसैले स्ट्युको लागि नुस्खा पठाउन सक्छ?
म दोस्रो हात मशीनको लागि हेर्दै छु, माइन जलाइएको छ र अब म एउटा नयाँ किन्न सक्दिन यदि कोही कसैलाई थाहा छ भने, कृपया आर्थिक आर्थिक हुन दिनुहोस्।
olaa miraa केहि महिना अघि मैले इन्टरनेट पृष्ठ k मा देखेकी थिएँ तर म थर्मोमिक्सd२ हात बेच्दै थिए जुन मलाई थाहा छैन यदि मसँग पेज छ भने http://www.segundamano.com र यसको लागत € 400 छ र यो मोडेल 31१ हो म आशा गर्दछु कि आयो सिओ उपयोगी छ।
मैले टमाटर बनाएको छु तर यसले मलाई जलाइसकेको छ। मेरो थर्मोमिक्स यो भन्दा पहिले एक हो, के यो यसका लागि हुनेछ? धन्यवाद
नमस्कार, तपाईलाई कस्तो छ? जब तपाईं क्यान्ड टमाटर भन्छन्, तपाईको मतलब क्यान्डमा कुचिएको प्राकृतिकको रूपमा हुन्छ र थर्मोमिक्स मोडेल २१ यो एक समान हुन्छ र यदि हामी प्याज थप्छौं भने यसलाई पहिले फ्राई गर्नुपर्दछ वा सबै सँगै धन्यवाद ……… ……………।
हो, मेरो मतलब त्यो टमाटर हो र यदि तपाईं प्याज थप्नुहुन्छ भने, अलि अलि साउथ गर्नुहोस्।
यो मलाई एक धेरै साधारण र स्वादिष्ट विधि देखिन्छ।
यो स्वाद, टमाटर स्वादिष्ट स्वाद !!!
म फाइदा लिन्छु र भोरमामा अण्डाहरू पकाउँदछु जबकि टमाटर फ्राई भएको छ। या त तिनीहरूलाई धुनुहोस् वा क्लि film्ग फिल्ममा तिनीहरूलाई लपेट्नुहोस्। लगभग २० मिनेट बितिसकेपछि, तपाईं तिनीहरूलाई हटाउनुहुन्छ र टोकरी उल्टो राख्नुहुन्छ ताकि यो स्प्लास हुँदैन।
म तपाईंसँग छु, फ्राइड गरिएको टमाटर एक आदर्श नुस्खा हो जुन बदले भेरोमाको फाइदा लिनको लागि हो!
म क्यान टमाटर बनाउने हरेक गर्मीमा तंगै थिएँ, दिक्क लाग्ने गर्मी र समयले तपाईंलाई छोड्दै थियो ... र अचानक तपाईंले यो नुस्खा मलाई दिनुभयो तपाईंले मलाई बचाउनुभयो! अर्को दिन मैले दुई जारहरू बनाएँ र अब म अझ बढी बनाउन को लागी तयार छ ... धेरै धेरै धन्यबाद ... म तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु कि यदि तपाईंसँग मेरो बच्चाहरूको लागि ब्ल्याकबेरी केक बनाउनु छ कि हिजो हामी पिकनिकमा थियौं र हामीले केही लियौं, म यसलाई क्रीमको साथ जोड्न चाहन्छु, स्पन्ज केक प्लेटहरू वा कुनै सल्लाह जुन तपाईं मलाई दिनुहुन्छ ... धेरै धेरै धन्यवाद र अभिवादन
पाउला, मलाई खुशी छ कि टमाटर रेसिपी तपाईंको लागि राम्रो थियो। ब्ल्याकबेरीसहितको केकको रूपमा, म केकलाई अचम्मित बनाउँदछु र शीर्षमा ब्ल्याकबेरीले यसलाई गार्निश गर्दछु।
यदि म प्राकृतिक टमाटर प्रयोग गर्दछु, के म तिनीहरूलाई छाला र बीउसहित राख्छु?
तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ, तर यो सत्य हो कि पछि तपाईंले केही गाँठहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ र मलाई थाहा छैन यदि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो भने।
म थर्मोमिक्सको साथ अलि माछा मार्ने छु तर म प्राय जसो प्रयोग गर्दछु। के म प्रयोग गर्दैनँ सामानहरू हुन्, मँ तपाईंलाई यो बताउन चाहन्छु कि मलाई के डाला राख्नु पर्छ किनभने म यसलाई बुझ्दिन। धन्यवाद अभिवादन
एलेना, जब तपाईं यसमा रहेको तरल वाष्पशील बनाउनको लागि नुस्खा चाहानुहुन्छ र मोटो बाहिर आउँछ, हामी बीकर हटाउँछौं। तर यदि यो त्यस्तो चीज हो जुन टमाटर वा जामजस्तो स्प्लेश हुन्छ, हामी सिसा हटाउँदा टोकरीलाई ढकनीमा राख्छौं र यसरी स्प्लासहरू त्यहीं रहन्छन् र सम्पूर्ण भान्साको दागलाई दाग गर्दैनन्।
मैले भर्खरै यसलाई थर्मोमिक्समा बनाएको हो र यो ठूलो छ। मैले यसमा रातो रातो मिर्च र हरी मिर्च राखें र थोरै ओरेगानो। नराम्रो कुरा यो हो कि यो रोटीको रोटी हो जुन तपाईं भिजेको बेला नै पाउनुहुन्छ।
मलाई लाग्छ, यति राम्रो चीज तपाई आफ्नो रोटी डुबाउन प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्न। मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन पर्यो।
मलाई यो मन परेको छ, स्वाद स्वादिष्ट छ, केवल एक किलो टमाटरको साथ यो एकदम थोरै आउँछ, मैले यसलाई गरें र त्यसपछि चामल थप्नुहोस् ताकी मैले थोरै पानी थपेँ र स्वाद थोरै घटे, म जान्न चाहान्छु। म के गर्न सक्थें मलाई फेरि यो हुन नदेऊ, हामी टमाटरको चामल साँच्चिकै मनपर्दछौं, तर त्यति बाक्लो छैन। अभिवादन र व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद।
Tomato०० ग्रम अधिक टमाटर प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, किनकि यदि हामी अधिक राख्छौं भने यो बन्द हुन सक्छ। तपाईं परीक्षण देख्न।
यो स्वादिष्ट हुनुपर्दछ, तर के यो भुटेको टमाटर बनाउन र फ्रिज गर्न सकिन्छ? धन्यवाद !!!!
नमस्ते मारी कारमेन, मेरो घरमा हामीसँग तरकारी बगैचा र टमाटरको ज्यादती छ, मेरी आमाले भ्याकुममा एउटा भाग राख्नुहुन्छ र अर्को भागले यसलाई तलीएको टमाटरमा बनाउँदछ र यसलाई धेरै स्थिर गर्दछ।
स्वादिष्ट फ्राइड टमाटर। हामीले यसलाई मर्क्डोनाबाट कुचिएको क्यान्डेट टमाटरको साथ बनायौं। प्रश्नहरूको एक जोडी:
पहिलो यदि हामी प्राकृतिक टमाटर प्रयोग गर्छौं भने ती छुन बिना नै राख्न सकिन्छ।
दोस्रो त्यहाँ गिलास राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्। यो थोरै तल अडीयो र हामी स्पञ्ज संग धेरै काम थियो दाग हटाउन को लागी।
टोकरीमा चीज यस्तो छ कि यसले वाष्पीकरण गर्दछ र फुक्दैन
नमस्ते रोलोग्, शानदार! यहाँ छिटो चावल र पोच अण्डा तयार गर्न को लागी लिंक छ: http://www.thermorecetas.com/2010/03/26/receta-thermomix-arroz-con-pisto-y-huevos-poche/
मैले बगैंचाबाट टमाटर बनाएँ र म फिक्काउँदा धेरै पहेलो र धेरै तरल बाहिर निस्किएन, मलाई थाहा छैन यदि मैले यसलाई खोलेँ भने म राम्रो गर्छु।
स्नूजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते Nives, कुचिएको टमाटरको ब्रांडको आधारमा तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसमा अधिक वा कम तरल पदार्थ हुन सक्छ। यसैले म सिफारिस गर्दछु कि यदि तपाईले धेरै धेरै तरल पदार्थ पाएको देख्नुभयो भने तपाईले अर्को 5-१० मिनेट को लागी पुनप्रोग्राम गर्नुहोस्।
मारिया डे ला ओ एग्रिलर भन्यो
म पम्पकिन केकलाई पास गर्न कसैलाई मन पराउँछु, र पम्पकिन पड्डी, धन्यवाद
मारिया डे ला ओ एग्रिलरलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मारिया, यहाँ केहि कद्दू पकाउने विधिहरू छन् जुन मलाई लाग्छ तपाईलाई मनपर्दछ:
म पहिलो पटक मेरो बगैचाबाट टमाटरको साथ फ्राइड टमाटरहरू बनाउन चाहन्छु र मलाई के पिउन कुन समय र गति चाहिन्छ भनेर जान्न चाहान्छु, त्यसपछि म सिल्भियाको विधि पछ्याउनेछु। मसँग नयाँ Thermomix मोडेल छ। धन्यबाद
JARCHA लाई जवाफ दिनुहोस्
किन पहिले सास बनाउने र अन्तिम मॅश गर्ने प्रयास गर्नुभएन? त्यसोभए तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंलाई कटेको छ वा छैन। जे भए पनि यो तपाईले बनाउने टमाटरको मात्रामा थोरै निर्भर गर्दछ तर म 30० सेकेन्ड राख्छु, गति 5।
म तिमीलाई सिल्भियामा धेरै फरक व्यंजनहरू छोडिदिन्छ यदि तिनीहरूले तपाईंलाई प्रेरित गर्न सक्दछन्:
बाक्लो टमाटर सॉस
इटालियन शैलीको टमाटर सॉस (सुको डे पोडोडोरो)
फ्रान्सिस्को अल्जा भन्यो
मैले यो 30 minutes को सट्टामा 35० मिनेट राखेको छु र यो जल्यो। यो विधि सही छैन।
फ्रान्सिस्को अल्जालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार फ्रान्सिस्को, कस्तो अनौंठो, हामी वर्षौंदेखि धेरै नतिजाका साथ यो नुस्खा बनाउँदै आएका छौं। के तपाईंले ठेलेको टमाटरको १ किलो राख्नुभयो? कहिलेकाँही हामी मात्रा कम गर्छौं भने हामीले समय पनि कम गर्नुपर्दछ। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद!
सुन्डेरेटेड टमाटर र बदाम मीटबलहरू स्पेनिश सॉसमा
तोरी र स्याउ जाम